U-Leo kunye ne-Sagittarius ukuhambelana ngothando, ubudlelwane kunye nesondo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana U-Leo kunye ne-Sagittarius ukuhambelana ngothando, ubudlelwane kunye nesondo
U-Leo kunye ne-Sagittarius ukuhambelana ngothando, ubudlelwane kunye nesondo
I-Charismatic kwaye iyonwabisa, uLeo kunye neSagittarius banokuba kunye ixesha elide. Zombini iimpawu zoMlilo, zithatha ubomi njengesiqhelo.
Xa beza kuthandana, aba babini baya kuziva bephila ngakumbi kunangaphambili kwaye iSagittarius iya kuziva ikhuselekile kwaye igcinwe yingalo yomthandi wayo kaLeo.
Iikhrayitheriya Isishwankathelo soGuquguquko lweDegio Sagittarius
Ukuthembela nokuxhomekeka Akuthandabuzeki ❤
I-Sagittarius esebenzayo iya kuphelisa bonke ubuvila kubomi bukaLeo. Xa beza kuthandana, baya kuhamba kwaye benze itheko elininzi. Banamandla kwaye bahlala benomdla kwinto ubomi obulungiselele yona ngokulandelayo, aba babini baya kubandakanyeka kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi ezibandakanyekayo.
Xa kuziwa ekuzinikeleni, iSagittarius ayizinikelanga kangako kuneLeo. Ngelixa uMtoli ethembekile, kuya kuba nzima ukukholelwa kuye ukuba ufuna ukuzibophelela.
Xa uLeo noSagittarius bethandana…
Ibali lothando phakathi kukaLeo kunye neSagittarius liya kuba ngumlilo kwaye lizalisekise. Bobabini bayathanda ukuya ethekweni kwaye iminyhadala abaya kuyiququzelela iya kuba ilungele ukuhleba kweHollywood. Inkanuko lelona gama lilungileyo lokuchaza esi sibini.
Bayakwazi ukukhulisa ukuzithemba omnye komnye, ke xa bekunye, abayi kuthandabuza ukwenza izigqibo ezinesibindi, ngakumbi kwimisebenzi yabo. Akunandaba nokuba zithini iingxaki, aba babini baya konwaba kunye xa beceba.
ILeos ziinkokeli ezizelwe ngokwendalo ezikhusela abo zibathandayo ngayo yonke into abanayo. Amaqabane abo aya kubekwa kumgangatho ophezulu, owonakeleyo noxabisekileyo.
Nokuba iSagittarius okanye uLeo abanakuze bakope kumaqabane abo. Ngaphandle kwento yokuba banomdla kwaye bengasendle, iiSagittarians zezinye zeempawu ezinyanisekileyo nezinyanisekileyo kwi-zodiac. Abakwazi nokuthetha ubuxoki obumhlophe, ndingasathethi ke ngobukhulu.
I-Leos ayicingi nokucinga ngokuthanda omnye umntu ngaphandle kweqabane labo kwaye bayalwa kakhulu xa bebandakanyeka kubudlelwane obubalulekileyo. Ezi zimbini zine-chemistry ebonakalayo engenakubonwa kwezinye izibini.
U-Leo uyakuchukunyiswa yindlela uSagittarius asondele ngayo kwaye ayithandayo. Xa beza kubona indlela iLeos evuthayo inokuthanda ngayo, iiSagittarians ziya kumangaliswa kwaye ziya kufuna ngaphezulu. Zombini zivulekile kwaye zinobuhlobo, ziya kuphuma zihlangabeze abantu abatsha ngalo lonke ixesha.
Sagittarius-Leo banokwaneliseka ngayo yonke into ebomini babo njengesibini. Ngelixa kunzima ukweyisela umntu wangaphambili ukuba azibophelele, ekuphela komntu onethuba elihle lokwenza oko nguLeo. Amakhono akhokelayo alo mqondiso anokukhupha into enhle malunga noMtoli.
Ubudlelwane bukaLeo kunye neSagittarius
Kwinqanaba le-1 ukuya kwi-10, ubudlelwane be-Leo-Sagittarius bufumana u-5 okanye u-6. Zininzi izinto malunga nobuntu babo eziphikisanayo, ke kuya kufuneka batyale imizamo emininzi kwaye balalanise ukuba bafuna ukwenza izinto ziyasebenza.
Ngamafutshane, i-Sagittarians kufuneka ivumele i-Leos ukuba ikhokele. Kuya kufuneka baqonde ukuba yile nto yenziwa nguLeos kwaye iya kuba yeyona nto ilungileyo kubudlelwane babo ukubenza balawule. Kananjalo, kufuneka baqonde kwaye baxabise ukukhula kukaLeo kunye nokukwazi ukubona umfanekiso omkhulu.
Ukubuyisela, iLeos akufuneki ibe nebhongo njengoko ihlala injalo. Bafuna ukujongana nenyaniso yokuba iiSagittarians zizimele kwaye zifuna indawo eninzi yokuphuhlisa ngokukodwa.
Ngaphandle koko, akufuneki bahoye umsindo wabo. Ama-Sagittarians ayacaphuka okomzuzu okanye emibini, kwaye emva kokuba belibele kwangoko, ndingasathethi ke kukuba baziva bezisola ixesha elide.
Ukuba bobabini uLeo kunye neSagittarius bayeke ukugqwesa kwizakhiwo zabo kunye nemithwalo yeemvakalelo, banokuba nethuba elihle lokuba sisibini esiphumelelayo.
Awunakuze uxele ukuba ngubani olawulayo ngezi zimbini. Ngamnye kubo uzama ukukhokela kwimeko. Ekuqaleni kobudlelwane babo, kunokubonakala ngathi abanalo ithuba lokwenza njengamaqabane njengoko behlala besilwa.
Kodwa ngokuhamba kwexesha, baya kuba nemfesane ngakumbi omnye komnye, kwaye ubudlelwane babo buya kukhula buvisisane. Kuya kuba ngathi bakhuphisana ngendlela eyakhayo, kuphela ukuphakamisa imimoya yomnye nomnye.
Ukuzimela kubonakala kuyinto ebaluleke kakhulu kubudlelwane bukaLeo-Sagittarius. Baya kuba ngamaqabane amakhulu ukuba banendawo eyaneleyo kwaye bashiyeke bodwa benze into abayifunayo. Asingombono mhle ukugxekana omnye nomnye.
Zombini zi-ethe-ethe kolu hlobo lokuziphatha. Kungangcono ukuba babenokuvumela ubomi babo bulawulwe yimpumelelo kunye nokusilela. Xa beza kujongana namaxesha anzima, baya kuba namabhongo ngakumbi kwaye baguquke ngakumbi njengesibini esiphumelelayo.
Aba babini bayakuxabisa ukomelela komnye nomnye, kunye nobuntu kunye nenyani yokuba banokwenza omnye nomnye ukuba akhululeke kwaye azimisele.
I-Sagittarius inokukufumanisa kunzima ukweyisela uLeo ukuba ahambe naye ukuba ngubani owaziyo ukuba zeziphi iindawo ezilityelweyo nguThixo emhlabeni kwaye ahlangane neenkcubeko ezahlukileyo, kodwa ekugqibeleni baya kuvumelana ngento ethile kwaye uSagittarius uya kufumana i-adventure okanye ufuna ngentumekelelo.
Kwinqaku elifanayo, ii-Sagittarians aziyi kusiqonda isizathu sokuba i-Leos ichithe imali eninzi kwiimpahla ezintle kunye neeresityu ezibizayo, okanye kutheni kufuneka ijongane nabantu xa kuya kuba lula ukubashiya.
Ayikuko ukuba uMtoli woyika ukujongana nabanye, abanalo nje ixesha lokuphikisana kwaye baveze izimvo zabo. Ngelixa zombini ezi mpawu zimbini zixabisa isibindi, banendlela eyahlukileyo yokujonga.
Umlinganiso womtshato ka-Leo kunye ne-Sagittarius
Izidingo zeemvakalelo zikaLeo kunye neSagittarius zahlukile kwaye ke, azonelisekanga ngendlela efanayo. I-Sagittarians ifuna umntu ukuba abavumele bazulazule ngokukhululekileyo, ngelixa iLeos inawo onke amathuba okuba nezinto kunye nomona.
Kwaye ubudlelwane babo buya kuba bude, uLeo uya kuqonda ngakumbi ukuba iSagittarius ayinakudumisa kwaye izinzile ngokweemvakalelo kwaye le yokugqibela iya kuhlala ibuza kuye ukuba isibini abasenzayo sifanelekile na.
Ukunyaniseka nangokuthe ngqo, iiSagittarians zinokuba buhlungu ngamanye amaxesha. Kwaye uLeo akangomntu wokwamkela inyani ebukhali ngokulula. Ungayichazanga eyokuba ayisebenzi kakhulu okanye yeyasekhaya. Ke ukutshata nokuhlala kwikhaya elinye kusenokungabi yeyona nto iluncedo kwaba babini.
Zombini i-Sagittarius kunye ne-Leo bane-libidos ephezulu. Kananjalo bobabini bayayithanda indima yokudlala kunye nemidlalo yenyama. Ukuzonwabisa nokulawula phakathi kwamaphepha, uLeos uthanda ukubeka emngciphekweni izinto xa esenza uthando kwaye uMtoli uyakuyithanda le nto. Indawo ye-erogenous kuye ngamathanga, ngelixa i-Leo isemva.
Uthando phakathi kweSagittarius kunye noLeo luyinto yokucinga, iyadlala kwaye inomdla. Ukuba i-Sagittarius inikwa indawo eyaneleyo yokuza nemibono emitsha, abanakufuna enye into ngaphandle kwebhedi.
Umlilo phakathi kwabo uyinyani kwaye unokukhokelela kumava amnandi. Izikhundla ezitsha kunye neendlela zokucinga ziya kuba yinxalenye yobusuku bazo kunye.
Baya konwaba omnye nomnye umzimba, iintliziyo kunye nengqondo. Igumbi lokulala yindawo apho iSagittarius kunye neLeo bedibanisa ezona zilungileyo.
Ngelixa zininzi izinto ezizigcina kunye, zininzi nezinye ezahlulahlula i-Leo kunye neSagittarius. Xa ubeka imiqondiso emibini yoMlilo kunye, kunokwenzeka kakhulu ukuba amaqabane aya kutsha.
Ngokwengqondo nangokweemvakalelo, iSagittarius kunye neLeo kubonakala ngathi abananto inye. Umtoli akasokuze ahlawule ukuncoma uLeo obafuna kakhulu. Ungayichazanga eyokuba akazukuvuma ukonganyelwa, ngelixa injongo yokuqala kaLeo ebomini ibonakala ngathi kukukhokela nokulawula wonke umntu nayo yonke into.
Ngenxa yokuba i-Sag ikude kwaye iyabanda, uLeo uya kuhlala eziva eshiywe ecaleni. Kwakhona, inyani yokuba iToli ithembekile kwaye iyacaphukisa inokuyenzakalisa kakhulu uLeo. Awunakho ukukhuphisana nendlela iSagittarius ebukhali ngayo xa iveza izimvo ngokunyaniseka.
ILeos ilindele ukuba yonke into abayithethayo ihlonitshwe kwaye ilandelwe kodwa iSagittarius ayinakuze ithathe iiodolo okanye yamkele ukuthintelwa. Ama-Sagittarians athatha umngcipheko, abaphandi, kubo, amaqabane abo e-Leo aya kuhlala ebonakala ngathi ngabantu abangavumiyo ukuba benze le nto bayifunayo.
Yintoni ekufuneka uyikhumbule ngo-Leo no-Sagittarius
Iimpawu ezimbini zoMlilo zinokuba nobudlelwane obunomdla apho baya kutsala omnye komnye. Yonke into malunga nezi zimbini ngokudibeneyo iya kupela ukudlala kunye nomdla.
uthini umqondiso ngoJanuwari 20
Bayadibana ngokwesondo kwaye banamathuba onke okuba kunye ixesha elide ukuba bayazakhela amandla abo.
Zombini zinobuhlobo kwaye zivulekile, i-Sagittarius ingumlingisi we-zodiac, ngelixa u-Leo eyasebukhosini. Bobabini banemincili yokujongana nemiceli mngeni emitsha kwaye banethemba elikhulu.
Esi sisibini esiza kufuna ukuhamba ngayo yonke into, ukuzama yonke i-adventure entsha kunye nobomi obutsha bomdlalo obulungiselele bona. Esi sibini sika-Leo-Sagittarius siya kuba nabahlobo abaninzi.
Kubonakala ngathi akukho nto ibahlisayo. Banoburharha kwaye bayathanda ukwenza iziqhulo ukuba nje iziqhulo azikho kwindleko kaLeo.
Umntu wangaphandle angacinga ukuba akukho nto inokwenza esi sibini sibuhlungu, kwaye uya kuba ulungile. Zombini ziyathandana kwaye zenzekile xa kufikwa kuthando.
Ukunyanzelwa, abaniki ngcamango kakhulu kwinto abaza kuyenza. Kubonakala ngathi ngabantwana ababini. Kodwa uLeo kufuneka angazicingeli kakhulu kwaye anikele ingqalelo ngakumbi kwiimfuno zeqabane.
I-Sagittarians inomdla, kodwa oku akuthethi ukuba abayifuni inkxaso yeqabane. Aba babini banokuba nokungqubana xa uLeo engavumi nokumamela kwaye iSagittarius iya kukhetha ukungathethi ngemicimbi kwaye ithathe indlela egudileyo ukuphuma kwimeko.
ILeos inomona kwaye inezinto, oko kuthetha ukuba kuya kubakho ixesha ebomini babo njengesibini xa uLeo eya kuba yiyo yonke le nto kwaye akhuphe ingqumbo yakhe. Kodwa ngombulelo, iLeos nayo iyaxolela kwaye iyaqonda, ke inzondo ayinakubanjwa ixesha elide.
Ukulingana phakathi kwenkululeko kunye nokugcina into iya kuba yinto enzima ukuyifumana kolu lwalamano. Kungenzeka ukuba i-Sagittarius ibe nguye oza kunika kuqala, kuba ngulo mqondiso onokuguquka.
Ukuba abatoli bazive bengafunwa, baya kushiya nje. Esi sisibini ekufuneka sifunde ukuba sisebenza njani nobuthathaka kunye neyantlukwano. Ulungelelwaniso luyimfuneko ukuba bafuna ukukhupha ukungqinelana okuhle.
ILeos kufuneka iyeke ukwenza ngathi iyazi yonke into, iiSagittarians kufuneka ziyeke ukuyeka ngalo lonke ixesha zijongana nobunzima.
Inye into eqinisekileyo, nangona. Abayi kuze badikwe omnye komnye. Banethuba lokuba kunye ixesha elide ukuba uMtoli uthembekile kwaye uLeo akenzi njengomphathi.
U-Leo othandweni: Ngaba uhambelana njani nawe?
I-Sagittarius ethandweni: Ngaba ihambelana njani nawe?
Izinto eziphambili ezi-9 zokwazi ngaphambi kokuDibana noLeo
Inyanga kwindlu yesi-6: Ibubumba njani uBuntu bakho
loluphi uphawu ngoJanuwari 2
i-aries man sagittarius umfazi uthanda ukuhambelana
Uphawu lweZodiac ngoFebruwari 25
wazi njani ukuba umntu oyithandayo uyakuthanda
nguwuphi umqondiso ongumhla we-14
Indoda ye-aquarius kunye nokuhambelana komfazi we-gemini